China 4J29-Kovar alloy strip Kovar bar / kovar sheet / kovar tube vagadziri uye vanotengesa | Sekonic
4J29-Kovar alloy strip Kovar bar / kovar jira / kovar chubhu
Mamwe Mazita Ekutengeserana: Kovar Alloy, 4J29, UNS K94610 (FeNi29Co17),29HК Kovar, KV-1,29HК-BИ, Werkstoff Nr.1.3981
Ichi chiwanikwa zvakare chakaisa girazi rakavharidzirwa uye kudzora kuwedzera chiwanikwa,Iyo alloy ine mitsara yekuwedzera yekuwedzera yakafanana neiyo yesilicon boron girazi rakaoma pa20-450 ° C, a yakakwira Curie poindi, uye yakanaka yakaderera-tembiricha chimiro chimiro. Iyo oxide firimu yeiyo alloy yakawandisa uye inogona kuve yakanaka yakanyoroveswa by girazi . Izvo hazvidyidzane nemercury uye inokodzera kushandiswa mu mercury-ine inoyerera metres. Ndiyo huru yekuisa chisimbiso chimiro chemagetsi emagetsi emagetsi.
Kovar Alloy Chemical Kuumbwa
.00.03 .20.2 28.5-29.5 .20.2 .30.3 .50.5 .00.02 .00.02 bharanzi 16.8-17.8 .20.2
Kovar Panyama zvivakwa
Kuwandisa (g / cm3) Thermal kuitisa (W / m · K) Simba remagetsi (μΩ · cm)
Kovar Avhareji yekuwedzera mwero
Ivhareji yakaenzana yekuwedzera coefficient a, 10-6 / oC
ruve 5.9 5.3 5.1 5.3 6.2 7.8 9.2 10.2
Kovar avhareji mutsara kuwedzera kuwedzera mwero mumutsara
Chiwanikwa Giredhi Chiratidzo kupisa kupisa system Ivhareji ine mitsara yekuwedzera yekuwedzera α, 10-6 / oC
Mune hydrogen mhepo inopisa kusvika 900 ± 20 oC, kuputira 1h, uyezve kupisa kusvika 1100 ± 20 oC, kuputira 15min, kusvika kusapfuura 5 oC / min chiyero chekutonhora kusvika pazasi pe200 oC yakaburitswa. ----- 4.6-5.2 5.1-5.5
Kovar chaiyo kuwedzera kwekuwedzera
Chiwanikwa Giredhi Ivhareji yakaenzana yekuwedzera coefficient a, 10-6 / oC
Kovar Alloy Inowanikwa Zvigadzirwa muSekonic Metals
Kovar Bhawa & Tsvimbo
Kovar jira & ndiro
Kovar musono chubhu & Caplliary Tube
Kovar ubvise & coil
Nei Inconel Kovar?
1.Kovar ine yakashandiswa zvakanyanya muindasitiri yemagetsi, senge simbi simbi dzakasungirirwa kumahamvuropu akaoma egirazi. Idzi nhengo dzinoshandiswa pamidziyo yakadai sesimba machubhu uye X-ray machubhu, nezvimwe.
2.Mu semiconductor indasitiri kovar inoshandiswa mune hermetically chisimbiso mapakeji kune ese ari maviri akabatanidzwa uye discrete wedunhu michina.
3.Kovar inopihwa mumhando dzakasiyana siyana kuti igadzirise kugadzirwa kwakanaka kwezvikamu zvakasiyana zvesimbi. Iine kupisa kwekuwedzera maitiro anoenderana neaya egirazi rakaomarara. Inoshandiswa pakuenzanisa majoini ekuwedzera pakati pesimbi negirazi kana ceramics.
4.Kovar alloy ivhu rakanyungudika, iron-nickel-cobalt, yakaderera yekuwedzera alloy ine makemikari akaumbwa anodzorwa mukati memiganho yakamanikana kuvimbisa chaiyo yunifomu yekuwedzera yekuwedzera zvivakwa. Yakadzama mhando dhairekitori anoshandiswa mukugadzirwa kweichi chiwanikwa kuona yunifomu yemuviri neyemuchina zvivakwa kuti zvive nyore mukudzora kwakadzika, kutsika uye machining.
Kovar Alloy Chikumbiro munda:
● Kovar alloy yakashandiswa kugadzira hermetic zvisimbiso pamwe neakaoma Pyrex magirazi uye zvedongo zvinhu.
● Ichi chiwanikwa chakawana kushandiswa kwakakura mumagetsi machubhu, ma microwave machubhu, transistors uye diode. Mumatunhu akapindirana, yanga ichishandiswa pakapfava kurongedza uye iwo maviri-mu-mutsara package.
Pashure: Stainless Simbi PH15-7MO
Zvadaro: Kuwedzera Alloy Invar36-4J36 Sheet / Bar / Strip / Tube
stellite mhete, Stellite 6B, Stellite 6, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Welding waya, Haynes 25 Waya,